”Dumarku ragga ku xoog ma aha!” – Haweenka oo ku dhaca imtixaanka adag ee Ciidamada Maraykanka & talo cusub oo lasoo jeediyey | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dumarku ragga ku xoog ma aha!” – Haweenka oo ku dhaca imtixaanka...
”Dumarku ragga ku xoog ma aha!” – Haweenka oo ku dhaca imtixaanka adag ee Ciidamada Maraykanka & talo cusub oo lasoo jeediyey
(Washington, DC) 09 Luulyo 2021 – Weriye tiknolojiyadda wax ka qora oo Maraykan ah lana yiraahdo Micah Curtis ayaa maqaal dheer oo uu qoray ku faahfaahiyey dood ku saabsan in haweenku aysan ka bixi karin howlaha adag ee Ciidamada Maraykanka oo uu sheegay in kala bar ka badan ay ku dhacaan imtixaanka.
Ninkan oo sidoo kale qoraa ah ayaa soo jeediyey in dib loogu laabto habkii soo jireenka ahaa ee howsha loo kala saari jirey askarta Maraykanka qaab lab iyo dheddig ah.
Wuxuu sheegay in sida ku qoran military.com, ay Ciidamada Lugta ee Maraykanku ka walaacsan yihiin natiijada ay gabdhuhu ka keenaan Imtixaanka Fayaqabka Askarta ee Army Combat Fitness Test (ACFT).
Xogaha la hayo ayaa muujinaya in kala bar ka badan gabdhuhu ay imtixaankan ACFT ku hoobtaan, taasoo keeni doonta in ciidamada laga saaro marka si rasmi ah loo shaaciyo sanadka soo aaddan.
Daacaddii: ma qof baa la yaabban? Inaanku jinsi ahaa waa laba-qaable (dimorphic), sidaa darteed, jirka labka iyo dheddigu dhisme ahaan meelo badan ayuu ku kala geddisan yahay. Raggu caadiyan waa ballaaran yihiin, xooggan yihiin waana dad u diyaarsan jir ahaan, ayuu qoray Curtis.
In la filo in dumarka oo halkaa marka horeba ninka uga duwani ay ragga la tartamaan jir ahaan, iyadoo la raadinayo sinnaan uun waa nacasnimo cad. In loo sinnaado howlaha ciidamada Maraykanku waa inuu qofku qabtaa wixii uu kari karo, ayuu daba dhigay dooddiisa, isagoo xusay inay jiraan haween badan oo ciidamada Maraykanka wacdaro ka dhigay isla markaana istaahila in la maamuuso.
Qoraagan ayaa ku dooday in dumarka lagu xujeeyo ACFT aysan keenaynin sinnaan ragga iyo dumarka ah, balse ay dumarka hor dhigayso imtixaanno aysan ka bixi karin oo ah inay ragga jir ahaan la tartamaan, taasoo keeni doonta in markasta ay raggu u bataan ciidanka, haween badan oo siyaabo kale ciidanka ugu shaqayn kari lahaana ay boos waayaan marka ay dhacaan.
Ingiriiska ayaa horay u sheegay in gabdhuhu ay ku dhibban yihiin tababarka adag ee la siiyo ciidanka gaarka ah ee SAS.
Previous articleMuuqaal la helay oo ”muujinaya” in Maraykanku uu ka dambeeyey dilkii Madaxwaynihii Haiti (Daawo sida ay wax u dheceen)
Next articleCelintii Raage Sharciga dalka raad kuma laha (RW Rooble xal baa laga rabaa)